Xiddig horay ugu soo ciyaaray Barcelona oo kashifay sababtii rasmiga ahayd ee ka dambeysay in la iibiyo Ronaldinho iyo Deco & doorkii uu Messi ku lahaa sheekadaas! – Gool FM
(Barcelona) 20 Jan 2020. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa xagaagii 2008 iska iibisay xiddigihii kala ahaa Ronaldinho iyo Deco, kuwaasoo loo arkayay xiddigaha ugu maqaamka sarreeyay safkooda xilligaas.
Waxay ahayd billawgii xukunka Tababare Pep Guardiola, waxaana uu iridda Camp Nou u tilmaamay Deco iyo Ronaldinho, waxaana Alexander Hleb oo waqti adag ku soo qaatay Barca uu bannaanka soo dhigay sababtii ka dambeysay in labada laacib kooxda hal mar laga fasaxo.
Hleb oo xagaagaas Barcelona kaga yimid dhanka Arsenal ayaa daaha ka rogay in Deco iyo Ronaldinho ay tababarka imaan jireen iyagoo soo isticmaalay maandooriyaha Khamriga, isla markaasna cabsan.
Sidaas darteed kooxda reer Spain oo u baqaneysa mustaqbalka Lionel Messi oo ahaa da’yar firfircoon ayaa labadan xiddig iibisay si aysan u saameyn kabtankooda waqtigan maadaama uu saaxiib dhow la ahaa iyaga.
“Ronaldinho iyo Deco waxay tababarka imaan jireen iyagoo cabsan, waana sababta loo iibiyay 2008, waxayna Barcelona ka cabsatay inay hoos u dhigaan Messi” ayuu Hleb u sheegay Voka TV.
Mucjisadii Brazil ayaa xilligaas u dhaqaaqay kooxda AC Milan, halka kubbad sameeyihii qaranka Portugal uu isna ku biiray naadiga Chelsea.